एलईडी वर्षा, सडक चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको: समीक्षा, वर्णन, प्रकार, विशेषताहरु
धेरै सज्जाकार र भित्री डिजाइनर एक ब्याकलाइटद्वारा रूपमा शक्तिशाली सजावटी तत्त्व आफ्नो काममा प्रयोग गर्न रुचाउँछु। आधारभूत, कार्यात्मक प्रकाश संग, अतिरिक्त प्रकाश स्रोतहरु विशेष मुड सिर्जना गर्न र रोचक वास्तुकला समाधान हाइलाइट गर्न स्पेस विशिष्ट क्षेत्रहरु ध्यान केन्द्रित गर्न, अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, विशेष सडक को कुशल र दक्ष प्रयोग प्रकाश (एलईडी वर्षा, झरना, पर्दा, प्लग), तपाईं एक अद्वितीय र अत्यन्तै उज्ज्वल सजावट कौसी, Windows वा सम्पूर्ण मोहरा क्षेत्र सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
एलईडी प्रकाश प्रकृति
आज, कसैले हैरानी गरिनेछ दीपक एलईडी। कारण यसको दक्षता, स्थायित्व र सुरक्षा गर्न, तिनीहरूले धेरै मान्छे को लागि दैनिक जीवनको भाग भएका छन्। बरफ-प्रकाश सक्रिय निजी घरमा, कार्यालय र मुख्य प्रकाश स्रोतहरु (दीपक झाड) र ब्याकलाइटद्वारा सट्टा सार्वजनिक स्थानहरु (एलईडी पट्टी, गुप्तवास प्रकाश, क्रिसमस illuminations) मा प्रयोग गरिएको छ।
प्रत्येक एलईडी दीपक एक छ Anode र कैथोड सक्रिय अर्धचालक चिप र reflector संग। बिजुली अतिरिक्त आपूर्ति हुन्छ, यो कैथोड गर्न Anode देखि वर्तमान प्रवाह अप्टिकल विकिरण को फलस्वरूप हुन्छ। यो उपकरण र समारोह सबै आकार र आकारहरू को बरफ-दीपक को, ठूलो देखि एक पारंपरिक सकेट (प्रकाश को एक शक्तिशाली स्ट्रिम लागि) गर्न रिबन वा चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको (वर्षा नेतृत्व) मा सानो गर्न विशेषता।
किन एल ई डी?
एक दीपक 1,00,000 घण्टा पछिल्लो गर्न सक्छन् किनभने धेरै उपभोक्ताहरु, किनभने यसको दक्षता र लामो जीवन को एलईडी प्रकाश स्विच छन्। बरफ-दीपक को कुनै कम मूल्यवान र अन्य प्रदर्शन विशेषताहरु:
कुनै पनि परिस्थितिमा, यो दीपक अप तत्काल कुनै ढिलाइ बिना रोशनी।
एलईडी प्रकाश स्थिर चमक छ।
प्रयोग गर्दा बरफ-दीपक प्रयोगकर्ता र बन्द स्विच चक्र संख्या चिन्ता छ छैन, गरमागरम बल्ब विपरीत, वेयर तिनीहरूले कति सक्रिय छन् निर्भर गर्दछ।
एक एलईडी प्रकाश स्रोत संग सञ्चालन उपकरणको कुनै कम्पन, किनभने यो रेशा वा अन्य संवेदनशील घटक समावेश गर्दैन।
गारलैंड नेतृत्व सडक ( "वर्षा", "फल्स" र अरूलाई), साथै सबै रोशनी बच्चाहरु र पाल्तु जनावर लागि पूर्ण सुरक्षित घर भित्र राखिएको छ। सञ्चालन गर्न प्रकाश उपकरणहरू एक उच्च भोल्टेज प्रयोग नगर्नुहोस्, त्यसैले बल्ब गरम करना छैन। औसत मा, आफ्नो तापमान 60 डिग्री भन्दा कुनै ठूलो छ।
एलईडी बल्ब को एक महत्वपूर्ण फाइदा अपेक्षाकृत कम परिवेश तापमान मा सञ्चालन गर्न जारी राख्न आफ्नो क्षमता छ। यो सुविधा एलईडी वर्षा, "पर्दा" र चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको अपरिहार्य क्रिसमस सजावट को एक किसिम बनाउँछ।
एक बरफ-दीपक को प्रयोगको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तर्क उनको पर्यावरणीय विशेषताहरु हो: तिनीहरूले केही अन्य संरचना रूपमा विषाक्त वा खतरनाक सामाग्री (पारा, फस्फोरस) समावेश छैन। यस कारण, एलईडी वर्षा सजावट र प्रकाश को वातावरण मैत्री हालतमा छलफल गर्न सकिन्छ।
केही अवस्थामा रोशनी र सजावट लागि एल ई डी को उचित प्रयोग
व्यवहार मा, बरफ-दीपक र तार विभिन्न प्रकारका निम्न क्रममा प्रयोग गरिएको हो:
को भित्री वा बाहिरी केही विवरण ध्यान आकर्षित गर्न।
कोठा को भित्री ठाउँ Zoning।
ठूलो-क्षेत्र प्रकाश बच्न।
असिद्धता पर्खाल सतहहरु (एलईडी "पर्दा" वर्षा) लुकाउन क्रममा।
संस्था को स्थिति र प्रतिष्ठा (होटल, खुद्रा र कार्यालय अन्तरिक्ष को लागि महत्वपूर्ण) हाइलाइट गर्न।
एक उत्सव illuminations सिर्जना गर्न।
प्रायजसो मा, एल ई डी साना दीपक रूपमा देख्न सकिन्छ, समान को टास्ने आधार एक लचिलो टेप संलग्न छ। बिन्दु र बरफ स्लाइड जुडनार पनि साधारण छन्। तर, सबै भन्दा शानदार र प्रभावशाली सकिन्छ चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको एलईडी सडक। को वास्तु ledges वा niches मा ढोका र Windows को खुलने मा, रेकर्ड पर्खालहरु मा मास्टर कि संरचना को समान प्रकारको लागि सबै नाम, - "वर्षा", "पर्दा", "पर्दा"। यस्तो प्रणाली फरक आकार र रंग को हुन सक्छ, त्यहाँ पनि सञ्चालन मोड (वर्दी चमक, झिम्काइ, झरना प्रभाव) को एक विकल्प छ।
एलईडी वर्षा: डिजाइन देखिन्छ र काम कसरी
चमकीले सजावट यो extravagant प्रकार जो दीपक गर्न तार संलग्न छन् एउटा लामो कर्ड हुन्छन्। एक कर्ड, को fringe साथ राखिएको छ जो, एक रेल, वा आधार भनिन्छ। यो टिकाउ प्लास्टिक वा सिलिकन बनेको छ। सामान्यतया, यस्तो गारलैंड लम्बाइ (लुपव्याक NAME OF TRANSLATORS) र fringe लम्बाइ दुई मीटर धेरै मीटर धेरै दसौं सेन्टिमिटर देखि लिएर पुग्न। अंकन "एलईडी वर्षा 2h3m" एक दुई झुन्डिएका तत्व आधारित लम्बाइ तीन मीटर स्थित छन् भन्ने हो। केही प्रणाली, को छतों र eaves साथ माउन्ट निर्माण को मर्यादा emphasizing लागि पूर्ण उपयुक्त हो कि unequal fringe तत्व छ।
दुई समान व्यक्तिगत एकाइहरु लामो पर्दा गठन गर्ने सँगै fastened हुन सक्छ मा सजावटी प्रकाश प्रणाली रोचक छन्। सुसज्जित विशेष connectors कि सर्किट तत्व (अधिकतम 20 टुक्रा) को एक ठूलो संख्या जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ संग तार को किनाराको। जो यस्तो सजावट पहिले नै लामो समय छ प्रयोग मान्छे को राय मा, यो सुविधा अत्यन्तै सुविधाजनक डिजाइन छ।
चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको को सही राशि किन्न र लामो fringe संग अनुमान गर्न, वर्षा एलईडी पाहुना हुनेछ क्षेत्र को एक पूर्व-मापन प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
नेतृत्व पर्दे को विविधता
आफ्नो घर एलईडी पर्दा सजाने बारेमा सोच, तपाईं के ठीक स्थापना र प्रयोग कसरी, तिनीहरू बुझ्नुपर्छ।
गारलैंड नेतृत्व ( "वर्षा", "पर्दा") विभिन्न रंग र सञ्चालनको मोड हुन सक्छ। त्यहाँ मोनोक्रोम र रंग डिजाइन हो, विकल्प परिसर र आफ्नो कल्पना को मालिक को स्वाद मा निर्भर गर्दछ। बहु-रंग पर्दे नियन्त्रक संग सुसज्जित छन्। स्थिर आभा वा झिलमिलाना: यी उपकरणहरु, चयन गर्न ठीक र दीपक को कामकाज को बाटो परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। एक फ्लैश मोड छानेर, तपाईं पनि हल्का को तीव्रता र रंग समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक चमक डिजाइन कति छ
एलईडी प्रकाश प्रणाली को लागत अध्ययन, हामी मोनोक्रोम चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको को मूल्य अलिकति रंग भन्दा कम देख्न सक्छौं। भित्री लागि छरितो डिजाइन र सडक भन्दा सस्ता छन्। उत्तरार्द्ध एक उच्च शक्ति, चिसो प्रतिरोध र impermeability यौगिकों छ देखि यो, अचम्मको छैन। पूर्णतया एक वा पर्खालहरु सबै सजाउनु गर्न चाहने ठूलो घरहरू मालिक, धेरै समान तार खरीद, एकदम पर्याप्त राशि तिर्न हुनेछ।
यो homeowner सम्भव छैन स्वतन्त्र एक गारलैंड एलईडी "वर्षा" जस्तो सजावट समायोजित छ भने पनि खातामा फास्टनरों र भुक्तानी स्थापनाकर्ता सेवा को लागि लागत लिनुपर्छ।
चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको (औसत आंकडा) को प्रकारको को मूल्य:
4 मिटर छोटो fringe लामो 0.6 मिटर गर्न - 16 यूरो।
3 मिटर लामो झुन्डिएका तत्व (एक मीटर) - 27 यूरो।
एलईडी चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको "उल्का वर्षा" सेट (प्रत्येक तत्व 30 सेमी लम्बाइ) - 22 यूरो।
प्रमुख पर्दा लम्बाइ2मिटर चौडा झुन्डिएको तत्व3मिटर संग - 112 EUR।
एलईडी वर्षा घर भित्रका राख्दै
जीवित कोठा, को सजावट योजना बनाउँदा कार्यालय वा व्यापारिक परिसर चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको निर्देशित हुनुपर्छ एलईडी रोशनी को मान्यता। तिनीहरूले अत्यधिक जलन उज्ज्वल प्रकाश तिरस्कार कि यस्तो तरिकाले डिजाइन, तर एकै समयमा यो सम्भव वर्दी रोशनी ठाउँ हासिल गर्न बनाउन।
बरफ-दीपक गर्न नियन्त्रक प्रयोग आफ्नो चमक को तीव्रता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
गारलैंड साथै स्टेपल, तार, डबल-पक्षीय टेप, फास्टनरों, चूषण कप र अन्य सामाग्री संग सञ्झ्याल वा ढोका खुलने मा पर्खालहरु, स्तम्भहरु, niches गर्न fastened। मास्टर लापरवाही को भित्री अस्वीकार्य छ कि खातामा लिनुपर्छ: धेरै लामो जस्तै कुरूप देखिन्छ रूपमा fringe तत्व को अपर्याप्त लम्बाइ। को भित्री को stylistic निष्ठा लागि सटीक म्याच पर्दा emblazoned क्षेत्र पालना गर्न आवश्यक छ।
सुविधा सडक डिजाइन
इरादा गर्दै छन् जो भवन को बाहिरी मा माउन्ट गर्नका लागि ती चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको, को mains जोडिएको वा ब्याट्री द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ। आफ्नो स्थापना पर्खाल, eaves वा कौसी को शीर्ष किनारा साथ एक पाश राख्दै समावेश छ। यसरी झुन्डिएको तत्व मुक्त रहन सक्छ। कहिलेकाहीं, आवश्यक भएमा, तिनीहरूले ठाडो विमान गर्न निश्चित छन्।
कुनै पनि काम विजार्ड सुरु गर्नु अघि, पर्दा आकार स्पेस को सजावट लागि उपयुक्त छ कि निश्चित गर्नुहोस्। स्टेपल, Clamps, केबल, तार: सडक सुरक्षित कुनै पनि पारंपरिक फास्टनरों चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको।
सबै एलईडी पर्दे बिजुली संरचना हो भन्ने तथ्यलाई आधारित आफ्नो स्थापना विजार्ड, तपाईं घरेलू बिजुली उपकरण संग निपटने को आधारभूत नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। विशेष भर्ना उहाँले, एक गारलैंड उच्च मोहरा वा छत माउन्ट मात्र एक अनुभवी विशेषज्ञ प्रदर्शन गर्न सक्छन् Belay उपाय प्रयोग आवश्यक छैन तर,। त्यहाँ उच्च-उचाईमा स्थापना को विधिहरू को उपकरण र ज्ञान नउठाई गर्न सक्नुहुन्न।
कफी निर्माता फिलिप्स: पुस्तिका, समीक्षा, फोटो
Subwoofer अग्रगामी - सही अडियो समाधान
यस ट्रांजस्टर - अर्धचालक प्रविधिको जग
वर्तमान ट्रांसफर्मर: कार्य सिद्धान्त र स्कोप
के प्रेशर कुकर Multivarki फरक छ: हामी बुझ्न
कसरी चयन र रेडियो किन्न
प्राथमिकता विकास को क्षेत्र। प्राथमिकता विकास व्यवस्था को क्षेत्रहरूमा मा
तेल-निर्यात देशहरू: इतिहास र modernity
महिला स्वास्थ्यको लागि Kegel व्यायाम गर्दछ
हामी विकासकर्ताहरूको लागि कृतज्ञ हुनुपर्छ जसको लागि 50 मुक्त आवेदन
रूसी संघको न्याय मंत्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानून संस्थान
किन फोन नेटवर्क पकड छैन? कारण
नरमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने ती लागि सरल सुझाव। खराब मौसम मा के गर्न?
दूध सूत्रहरू: विकल्प संग गलत हुन कसरी छैन?
कसरी किंडरगार्टन को प्रिपेरेटरी समूहमा शरद ऋतु छुट्टी मिलाउन?
शब्द को एटिमोलजी र अर्थ: kibitka के हो
दबाइ को विवरण प्रयोगको लागि निर्देशन, analogs,: "Oseltamivir"